N'ime oke ọrụ nchekwa nke Ime; N'ime ọrụ dị na ime obodo Siirt Herekol, n'okpuru nhazi nke Iwu Gendarmerie, e kpebiri na mmadụ abụọ n'ime mmadụ ise na-eyi ọha egwu gụnyere na ndepụta ntụpọ nwere ụgwọ ruru 5 puku TL. [More ...]
Ministri ime ime, “ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ wdg. O zigara ndị nnọchi anya na Gọvanọ 81 na-achịkwa banyere ebe ọrụ, ogige, paseeji, mpaghara, ebe ntụrụndụ na ahịa ahịa. Dabere na okirikiri, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, cafe, patisserie, ụlọ kọfị, ubi tii, [More ...]
TCDD General Directorate Port na Ferry Management Department Haydarpaşa Port Operation Directorate Operation Directorate ụbọchị 31.12.2019 wee gụọ E.431564. Site na isiokwu mmasị, TCDD Port, nke a ga-emejupụta na 2020 [More ...]
Türkiye’nin önemli düşünce insanlarından biri olan, yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba vefat etti. 72 yaşında hayata gözlerini yuman ve birçok önemli eserin sahibi olan Oruç Aruoba’nın hayatı merak ediliyor. [More ...]
Onye na-ahụ maka njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, zutere ndị nnọchi anya nke ndị na-ahụ maka GSM, ụlọ ọrụ n'ọgbọ ọhụrụ na ngalaba nkwukọrịta na Turkey, ezutela mkpa na usoro mmepe. Turkcell, Vodafone na Türk Telekom [More ...]
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na emejuputara usoro iwu ahụ nke ọma site na njikwa ọma nke usoro ndị eburu na mpaghara mmiri maka coronavirus (Kovid-19), na n'ime oke a, ụgbọ mmiri maka ebumnuche njem na [More ...]
Fatih Sultan Mehmet Bridge dị n'etiti Hisarüstü n'akụkụ Rumeli nke Bosphorus na Kavacık n'akụkụ Anatolian, ihe dịka kilomita 15 n'akụkụ ebe ugwu site na 5 nke July XNUMX. Ihe nke abụọ dị mkpa ijikọ akụkụ abụọ nke Bosphorus [More ...]
Zişan Hande Kazanova (amuru ya na Septemba 25, 1973, Izmir) theaterlọ ihe nkiri Turkey, sinima na onye na - eme ihe nkiri na onye na - eme ihe nkiri. Ọ bụ naanị nwa nke ezinụlọ Kazanova. Ọ gụrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị na Alaybey Primary School ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na İzmir Fatih College. [More ...]
SpaceX, onye ọchụnta ego bụ Elon Musk guzobere na 2002, mere nke ọma ibughere oghere nke na-eburu ndị mmadụ na nke mbụ. Rọkpụ Falcon 9 na Draị Dragọn na-ebu Robert Behnken na Douglas Hurley gaa n'ọdụ ụgbọ elu ụwa [More ...]
E mepụtara ụlọ ọrụ injin mbụ nke ala anyị nke THK na Gazi Orman Çiftliği. Ọrụ ụlọ ọrụ ahụ dịgidere ruo 1951 na n'ihi ọnọdụ nke oge ahụ, a kpọfere ya na igwe na Chemical ụlọ ọrụ n'otu afọ ahụ. Factorylọ ọrụ a [More ...]
Taa na History 31 May 1934 ụbọchị na 2487 sitere na French site İzmir-Kasaba na Temdidi Railways (703 km). Mmasị 5 na mgbapụta afọ 50 1934 Türk [More ...]
IMM okporo ụzọ maka okporo Roadzọ Istanbul na Ọnọdụ okporo ụzọ ugbu a RAYHABER Ọ na-enye ụzọ kachasị mfe na ọnọdụ okporo ụzọ ị nwere ike iji maapụ okporo ụzọ dị ndụ. Ọnọdụ okporo ụzọ nke etiti etiti etiti na mpaghara ndị ọzọ, [More ...]
Maka Roadzọ okporo ụzọ na Ọnọdụ okporo ụzọ RAYHABER Ọ na-enye ụzọ kachasị mfe na ọnọdụ okporo ụzọ ị nwere ike iji maapụ okporo ụzọ dị ndụ. Ọnọdụ okporo ụzọ etiti etiti etiti etiti na mpaghara ndị ọzọ, okporo ụzọ dị arọ [More ...]
AKP Adıyaman onye na-esote Ahmet Ayd statedn kwuru na arụola ọrụ niile dị mkpa iji mee ngwa ngwa ụzọ ụgbọ oloko na mpaghara Gölbaşı, yana oru ngo nke Gölbaşı-Adıyaman-Kahta High Speed ​​Train project, nke a na-arụ [More ...]
Ọrịa nje Corona akpatala nnukwu ọnya n'ụwa niile na mba anyị. Ọrịa na-efe efe n'ụwa niile maka usoro ndị eweregoro, Turkey so na mba ndị zutere ebe kachasị mma. Nke nta nke nta, mgbe ịbanyechara usoro nhazi iwu [More ...]
Bilal Ekşi, onye isi njikwa nke THY, onye ọ kwụsịrị ụgbọ elu ya n'ihi usoro coronavirus ma ga-amalite ịrụ ọrụ na June, kwuru na enweghị mkpebi ọ bụla na oche ndị ahụ ga-efu na ụgbọ elu. N'ihi oria ojoo nke Covid-19 [More ...]
Minista Karaismailoğlu kwuru, "Anyị na-amalite ụgbọ elu n'ọdụ ụgbọ elu anyị natara asambodo ha site na ime nkwadebe maka Kovid-19. Portsgbọ elu ụgbọ elu isii anatala asambodo ha. Mgbe ezumike ọnwa 6 gasịrị, oge mbụ anyị bụ elekere 2 nke 1 nke June. [More ...]
Kemgbe mmalite nke ọrịa coronavirus, Kocaeli Obodo ukwu, nke nọ na enyemaka ndị na-elekọta mmadụ na ngalaba ọ bụla nke ụmụ amaala bi na Kocaeli, na-agbatị oge njem njem ọ na-enye ndị ọrụ ahụike na ndị ahịa ọgwụ. Obodo Obodo [More ...]